iindlela ukubala, yokulinganisa credit esijikelezayo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ iindlela ukubala, yokulinganisa credit esijikelezayo
Esijikelezayo mboleko yinkqubo eya uhlawule isixa mali kunye nomdla iintlawulo zenyanga. iintlawulo zenyanga, iinkampani card kunye nenkampani letyala ungacwangcisa naliphi na inani The ngaphezu ubuncinane mali ubulumko Ru mna ohamba. Ukuba ukusebenzisa isixa ngu 200,000 yen okanye ngaphantsi, kuyinto eqhelekileyo 5000 yen ngenyanga nganye kwaye intlawulo ubuncinane.
reference | olujikelezayo mechanism ngetyala
reference | njengephepha hlobo
iintlawulo zenyanga indlela yokuhlawula olujikelezayo ngetyala luthandwa elilelakhe ngo-1000 yen ukuba
5000 yen okanye ngaphezulu, nto leyo ugqibe ngokwakho kuyinto iyafumaneka. Inzala iya kusoloko kwenzeka credit esijikelezayo. Phantse efanayo njengoko umdla mboleko, oko yinkqubo ukuba uza kuhlawula malini kwi candelo kamva ukuthenga impahla ngaphambili ,. Sebenzisa ukulingana, iphindwe izinga ikhomishini ukuba isixa semali ekufuneka ibuyiselwe ngamanye amazwi, ngokwahlula ngeentsuku 365, yande yi iintsuku ezingama-30 ziza kuba iintlawulo umdla yenyanga.
, umzekelo, njenge 5,000 yen iintlawulo zenyanga, cinga ngemeko usebenzisa 200,000 yen. Kuye izifundo ethe ngqo yindlela credit olujikelezayo ukuba udidi kunye inzala intlawulo yinqununu. Izinga Commission, oko kukuthi isantya yonyaka wokwenene uya kuba-15%. Le umyinge wenzala esetyenziswa kwiqela ajikelezayo ngetyala.
ngolokuqala enyangeni leyo 7054 yen ababethwele yen 2054 umdla 5000 yen, nto leyo unikezelwa intlawulo inqununu iya kuhlawulwa. Sebenzisa eseleyo 195.000 yen, inqununu iya kuqhubeka ngo 5,000 yen. Inyanga elandelayo kwentlawulo umdla yen 7484 yen 2484, iintlawulo zilandelayo umdla yen 2342 ngu \_ 7362. Oku kuthetha ukuba
ukuya kwanciphisa eseleyo yi yen 5,000 ngenyanga nganye, intlawulo iza kugqitywa ngeenyanga 40. Kwiinyanga ezingama-40 emva kokuba nyanga iphelileyo, inzala iza kuncipha ukuya yen 63. Ngenxa yoko, ahlawule ngo-40 iinyanga inzala iya kuba 50.914 yen ewonke. Ukuthenga 200,000 yen, kuba ufuna ukuhlawulwa malunga 5000 yen ukususela 7000 yen kancinane ngenyanga nganye, ungabona ukuba ngetyala olujikelezayo kulungile. Intlawulo
ukuba ibekwe Ukutshintsha umdla imali kwakhona utshintsho
kunye iintlawulo zenyanga ingatshintsha umdla nayo iye yatshintsha. Kwaye ngoku umzekelo yangaphambili yaye wahlawula 10,000 yen, ngolokuqala enyangeni leyo, 12.054 yen, inzala akaguquguquki ngexesha lika 5000 yen. Oku kuye zasinciphisa umdla kancinane kancinane ukusuka kwinyanga yesibini. Inzala lwenyanga elandelayo, ukuze 2420 yen yaba yen 2484 xa seyibuyisiwe phambi kowe-5000 yen, kuba ngenyanga elandelayo \_ 2342 yi \_ 2219. Ekubeni
Inqununu iya kuqhubeka ngo 10,000 yen, intlawulo kwiinyanga-20 ukuze ulugqibe, ukuba imali iyonke umdla kwi yen 25.903, 25,000 yen xa kuthelekiswa kwimeko kuhlawulwa kwithuba leenyanga ezingama-40 ngo 5000 yen uyakwazi ukusondela ucinezelo. Ngale ndlela, kokukhona ngokwandisa iintlawulo zenyanga, inzala ehlawulwa xa zizonke ziya kuba lincinane.
ingqiqo zemali ukuze sinikele ingqalelo
ngetyala olujikelezayo ukuze ukuya umam kukuba, kuba intlawulo encinane ngenyanga, kwaye kusenokwenzeka ukuba konke konke ukutenxa kule rhoqo ukususela ngengqiqo malini. Kwiminyaka yakutshanje inkoliso inkampani yekhadi le inika inkonzo ebizwa ngokuba "ribonucleic kamva". Khankanya isixa semali xa uthenga evenkileni, website yaye kamva ngocingo yinkqubo ukuba betshintsha ajikelezayo ngetyala. I
ikhadi inkampani, mhlawumbi uqaphele ukuba abaninzi ezingalindelekanga ngongoma-nkonzo yi ajikelezayo ngetyala. Ukuze ube imvakalelo ibambisene ndiboleke ngabanye kwimveliso nganye ethengiweyo ngezavenge, kuya kuba lula ngakumbi ajikelezayo ngetyala. Abantu abafuni kuhlawula kakhulu umdla olujikelezayo ngetyala, xa intlawulo waba credit esijikelezayo, ungafuna ukwenza yombane okanye lubuyiswe xa imali ezinamatheleneyo nako kuthengwa. Ekubeni 00D_
ikhadi inkampani, mhlawumbi uqaphele ukuba abaninzi ezingalindelekanga ngongoma-nkonzo yi ajikelezayo ngetyala. Ukuze ube imvakalelo ibambisene ndiboleke ngabanye kwimveliso nganye ethengiweyo ngezavenge, kuya kuba lula ngakumbi ajikelezayo ngetyala. Abantu abafuni kuhlawula kakhulu umdla olujikelezayo ngetyala, xa intlawulo waba credit esijikelezayo, ungafuna ukwenza yombane okanye lubuyiswe xa imali ezinamatheleneyo nako kuthengwa. . Ukuze ube imvakalelo ibambisene ndiboleke ngabanye kwimveliso nganye ethengiweyo ngezavenge, kuya kuba lula ngakumbi ajikelezayo ngetyala. Abantu abafuni kuhlawula kakhulu umdla olujikelezayo ngetyala, xa intlawulo waba credit esijikelezayo, ungafuna ukwenza yombane okanye lubuyiswe xa imali ezinamatheleneyo nako kuthengwa. . Ukuze ube imvakalelo ibambisene ndiboleke ngabanye kwimveliso nganye ethengiweyo ngezavenge, kuya kuba lula ngakumbi ajikelezayo ngetyala. Abantu abafuni kuhlawula kakhulu umdla olujikelezayo ngetyala, xa intlawulo waba credit esijikelezayo, ungafuna ukwenza yombane okanye lubuyiswe xa imali ezinamatheleneyo nako kuthengwa.